မျိုးတေဇာမောင် ● ဂျူနီယာစိုးမိုးထွန်းသို့ …. | MoeMaKa Burmese News & Media
သုအိုင်စံ - စောဒေါန၊ အသက် ၃၄၊ လွင့်နေသေးတယ်
​နေဝန်းနီ (မန္တ​လေး) - မိနီတို့အဖိုး ဂျမ်း
အောင်ဝေး - လွ မ်းတ င်း
ငြိ မ်းချ မ်းေ ရးခ ရီးရှ ည် ချီ တ က်နေ သူ များ သို့ ( ၇ ) ( နိ ဂုံး)
ဆောင်းလူ ● ကျွ န် ပြုခြ င်း
ရဲဝင့်သူ ● မိုင်းနင်းထားတဲ့ကဗျာ
ဂါတွေ ဘလတ်ပြီး နူးတဲ့ ဟောဒီမြေကမ္ဘာ
သျှင်မျိုးငယ် ● မျက်လှည့်
ခင်ရင်မောင် - ပန်းပွင့်မယ့်ရာသီ
စိုးေ န လ င်း-ဟောကိ န်း
မောင်စွမ်းရည် - “အဖိုးနဲ့ ပိုးဟပ်”
ထွန်းဝင်းငြိမ်း - ယုံကြည်မှုကျော့ကွင်း
မျိုးတေဇာမောင် ● ဂျူနီယာစိုးမိုးထွန်းသို့ ….
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆
မင့်ဖေဖေမရှိတော့တဲ့အခါ မင်းဟာ တို့အားလုံးရဲ့သားပဲ
အဲ့ဒီလူ မင့်အဖေ ကိုစိုးမိုးထွန်း ဟာ
အနာဂတ် အတွက်ပြင်ဆင်ပါ… သားရေ …။
အမြဲတမ်း သံသယတရားခံ (မျိုးတေဇာမောင် ဘာသာပြန်) (0)
လက်ဆောင် (နိုင်ငံတကာကဗျာတချို့) (0)
မျိုးတေဇာမောင် ● ရိုဆာ ဂျမာလီ (Rosa Jamali – Iran, 1977) (0)
မျိုးတေဇာမောင် ● နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် (0)
မျိုးတေဇာမောင် ● ဆောင်းတွင်းအိပ်မက် (၈) (0)
Yan Aung Publishing House - ရန်အောင် စာအုပ်တိုက်